Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Xooga Ummadi Leedahay Waa Dhalinteeda! By: Liibaan Miyir
Halgamayaal hibanmayno tagtadeeni ee waxaynu hubsan timaadadeena, talaabo walbana kafiirsi iyo taxadar ayaynu uyeelan doonaa, dadalkuna waa lama huraan, tixgalintuna waa muhiim, daacadnimaduna waa qasab, inagoo marwalba qalbiga ku hayna isjacaylka wadaninimo ee xubnaha jwxo lagu yaqaanay.
Halgamayaal taariikhda dheer ee wax qorta, tiro aad u yar oo dhalinyarteena ah ayaa gudoonsada doorka ay ku leeyihiin xornimo gaadhsiinta dalkooda iyagoo wajahaya khataraha ugu badan ee horTaala halgankooda, waxaynuna
rumaysanahay fikrada ah in mawjadahaas iyo taariikhduba ay inoo adeegi doonaan, kuwa maanta raba xornimo dhab ah ayaa ka tiro badan ilaa xad kuwa raba inay kuhoosjiraan gacan gumaysi.
Halgamayaal tamarteena, caqligeena iyo waqtigeenaba waxaynu u huraynaa inaynu ku dadaalno sidii aynu ilayska ugu shidi lahayn umadeena, waana ta aynu u taaganahay, iftiinka ka soo ifa ilayska aynu shidno ayaa si dhaba ah
u iftiimin doona dalkeena insha allaah.
Halgamayaal waxay fikradu guulaysataa marka rumaysnaanteedu xoogaysato, darteedna loo bixiyo daacadnimadeeda, lana helo diyaarsanaanta keenaysa nafhurid iyo xaqiijinteeda oo loo diyaar garoobo aadida gudihii Ogadeniya, Taasina waxay ku timaadaa afar tiir:
1: Aas’aaska iimaanku waa rumayn.
2: Aas’aaska Daacadnimaduna waa qalbi fayow.
3: Aas’aaska Xamaasaduna waa dareen xoogan.
4: Aas’aaska Hawshuna waa go’aan adag.
Halgamayaal waxaan idinleyahay, xaqiiqooyinka maanta waa riyooyinkii shalay, riyada maantana waa xaqiiqda barito, dhalinyartu ha aqoonsato inay tahay xooga aan xuduudka lahayn ee isbadal la taaban karo, la tiigsan karo,
oo xornimo ah keeni karta insha allaah.